स्रष्टा, सिर्जना र प्रतिरोधका स्वरहरू : खेम थपलिया – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७४, १५ जेठ सोमबार १५:२६ May 29, 2017 1283 Views
नेपालका जनपक्षीय स्रष्टाहरू सुन्दर सपनाका निम्ति संसदीय दलाल पुँजीवादविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । संसारभर सपनाकै लागि असली सर्जकले प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । स्रष्टा स्वप्न–हन्ताका विरुद्ध जाइलाग्छ । कवि पास सुन्दर सपनाका लागि लड्नुभयो । कवि इच्छुकले पनि सुन्दर सपनाका लागि उच्च सहादत स्वीकार्नुभयो । उहाँको प्रतिरोधको उच्चता निकै माथि छ । त्यसैले कवि दिनकरले भन्नुभएको सम्झना आउँछ, “कविता बौद्धिक प्रतिरोध हो ।” दलाल संसदीय सत्ताद्वारा लादिएको कथित स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शासकद्वारा देशमा हत्या, आतङ्क, दमन, धरपकड, खानतलासी तीव्र पारिएको यतिबेला लेखक–साहित्यकारहरू पनि झन् प्रतिरोधी बनेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले त्यसको कडा मुकाबिला गरेका छन्, सशक्त प्रतिरोध गरेका छन् । यो अभियानमा सिङ्गो पार्टी–पङ्क्ति, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्ति एवम् आमूल परिवर्तनप्रेमी जनसमुदायको दृढतापूर्वक साथ–समर्थन रहेको छ । यसमा लेखक, साहित्यकार, कलाकार, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक समुदायको हार्दिक ऐक्यवद्धतासहित अतुलनीय योगदान रहेको छ । सत्ताको रछ्यानमा उम्रिएको ‘ प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय झारपात’ लाई ध्वंस पार्न एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई अङ्गीकार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनार्थ यसपटक सर्जकीय भूमिका मुखर भएको छ ।
यतिबेला पाब्लो नेरुदाको यो भनाइ निकै स्मरणीय हुन आउँछ, “मलाई अक्टोबरक्रान्तिले गहिरो निद्राबाट झक्झक्याइदियो ।” यो कुरा निकै महत्वकारी छ । हुन पनि हरेक क्रान्ति, वर्गसङ्घर्ष/जनसङ्घर्षले जनपक्षीय स्रष्टाहरूलाई गहिरोगरी छुने गर्दछ । महान् अक्टोबर क्रान्तिदेखि चिनियाँ क्रान्तिसम्म पनि त त्यही भयो । नेपालको जनयुद्धको समयमा पनि त्यही भयो । अहिले कथित स्थानीय निर्वाचन खारेजी अभियानको सङ्घर्षको पनि यही कुरा लागू भएको छ । सतहमा हेर्दा नेकपाको नेतृत्वमा भइरहेको निर्वाचन खारेजी अभियान सामान्य परिघटना जस्तो लाग्न सक्तछ तर यथार्थमा यो क्रान्ति हो, वर्गसङ्घर्ष हो । यो अभियानमा सर्जकहरू आ–आफ्ना सिर्जनामार्फत प्रतिरोध मात्रै गरेका छैनन्, उनीहरू भौतिक रूपमा प्रतिरोध गरेका छन् । यही प्रतिरोधका कारण दलाल संसदीय सरकारले दर्जनौं कवि, लेखक–साहित्यकारलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । उसले वाक्– स्वतन्त्रता लुटेको छ; सामान्य प्रजातान्त्रिक र मौलिक अधिकार पनि खोसेको छ । झुट्ठा मुद्दा लगाइएको छ । सरकारले श्वेतआतङ्क मच्चाइएको छ, कलमलाई तोप र सिर्जनालाई बम देख्न थालेको छ, पत्रकारलाई भयानक सत्रु देख्न थालेको छ, जनतालाई ज्यानी–दुश्मन देख्न थालेको छ । यी र यस्तै यस्तै परिघटनाले प्रचण्ड र उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारको दिवालियापनलाई राम्ररी नै उजागर गरिदिएको छ । दानवी कानुनका फलामे–साङ्लालाई चुँडाउन सङ्घर्षबाहेक अरू केही विकल्प छैन र हुँदैन पनि । मानिस किन ज्यानको बाजी राखेर सङ्घर्षमा होमिन्छ ? पुँजीवादी चमकधमकलाई च्यातचुत पार्दै मानिस किन सङ्घर्ष, बलिदान र मुक्तिको गीत गाउँछ ? केवलपुरे किसानले ‘सङ्घर्षको ठीक गर’ भन्ने गीत त्यत्तिकै गाउनुभएको थिएन ।
सङ्घर्षका पनि आफ्नै पद्धति हुन्छन् । यसका आफ्नैखालका मूल्य पनि हुन्छन् । सङ्घर्षमा तिनको पालनाको अपेक्षा पनि गरिन्छ, जुन कुरा स्वाभाविक हो तर सरकारले अभियानका क्रममा केही आचश्चर्यलाग्दा घटना घटाएको छ । चितवन–खैरहनीमा आफ्नै घरमा मध्यरातमा सुतिरहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी चितवन जिल्ला सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) की केन्द्रीय सदस्य सिसम शाहीलाई नाबालक छोराछोरी (सुजित १० वर्ष, सुवासना ४ वर्ष सहित प्रहरीले छापामार शैलीमा गिरफ्तार गरेर मानसिक यातना दिइयो । त्यस्तै, सुनसरी–धरानमा सरकारले २ वर्षिया बालिका ग्रिसिका राईको बिचल्ली बनाइदियो । जब कलाकारसमेत रहनुभएका कमरेड सुरज राई र खड्कुमारी राईलाई सरकारले पक्राउ ग¥यो, तब सुरु भए ग्रिसिकाका दुःखका दिन । उनीहरूले बालिका ग्रिसिकाको अभिभावकत्वलाई कुनै मतलव गरेनन् । अन्ततः उनलाई पनि प्रहरी कार्यालयमा पु¥याइयो । यो दृश्यले जो कोही पनि एकपटक हृ्दय चस्स भएर आउँछ तर सरकारले यो कार्यलाई आफ्नो बहादुरी ठानेको छ । कैयौं ठाउँमा सामना सांस्कृतिक परिवारको साङ्गीतिक कार्यक्रम रोकियो । कलाकार हरूलाई धम्क्याइयो । अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महसङ्घका कतिपय कमरेडहरूलाई पक्राउ गरिएको छ, कतिपयलाई घर छोड्न बाध्य पारिएको छ, कतिपयलाई दुश्मनका आँखा छलीछली हिंड्न बाध्य पारिएको छ । यसरी सरकारले पूरै जनयुद्धकालीन झझल्को दिलाएको छ । सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यस्तै–यस्तै घटना घटाएको छ । राज्यले देशभर श्वेत–आतङ्क मच्चाएको छ । सरकारको पुनः एकपटक आफ्नो दलाली–फासीवादी असली चरित्र देखाएको छ ।
जसले कुनै बेला क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँले नै अहिले सबै कुरा पानीमा बगाइदिनुभएको छ । उहाँ निरन्तर कमजोर मात्रै बन्नुभएको छैन, उहाँका हरेक कुराहरू पाखण्ड सावित बन्दै गएका छन् । यसले जनपक्षीय स्रष्टालाई नराम्ररी चिमोटेको छ अनि आस्था घिमिरे गजलमा यो भन्नुहुन्छ ः
यो निर्वाचनमा सरकारको सांस्कृतिक तथा नैतिक धरातल धेरै नै कमजोर देखियो । हुन त संसद्वादको विशेषता नै नैतिकहीनता हो । एमालेले राप्रपासित चुनावी तालमेल ग¥यो । माओवादी केन्द्रीले नेपाली कांग्रेससित चुनावी तालमेल ग¥यो । यो तालमेल कुनै पनि हालतमा सैद्धान्तिक र वैचारिक थिएन । यो त जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र जनतालाई बेवकूफ बनाउने चालबाजी थियो । यसले यी दलहरूको नैतिक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक धरालतलाई उजागर गरिदिएको छ । खाने बेलामा संसद्वादीहरू एक भएको हल्ला गर्दछन् तर भागबण्डा मिलेन् वा आफूले सोचेको जस्तो भएन भने यिनीहरू एक– आपसमा खनिन्छन् र मारकाट गर्छन् । एकले अर्कोको ज्यान लिन पनि पछि पर्दैनन् । संसदीय दलालहरूका झगडालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा कविहरूले त्यस्ता केही रचना प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एउटा चर्चित गीत हेरौँ ः
खुराफातीले … सूर्य भनेर
म्याक्सिम गोर्कीले भन्नुभएझैँ “श्रम–संसार क्रान्तिको आवश्यकताको बोधसम्म पुगेको छ । साहित्यको कर्तव्य त्यसको सहायता गर्नु हो; जसले विद्रोहको झन्डा उठाएको छ । जति सफलतापूर्वक त्यो सहयोग गरिनेछ, त्यत्तिकै छिटो ‘डगमगाइरहेको स्वर्ग’ सधैँको लागि पतन हुनेछ ।” हो, डगमगाइरहेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि हामीले आफ्नो प्रतिरोधरात्मक क्षमतालाई अझ माथि उठाउन आवश्यक छ । हाम्रो सिर्जनात्मक आवाजलाई अझ धारिलो र खारिलो बनाउन आवश्यक छ । दलाल प्रतिक्रियावादी सरकारले जति दमन गरे पनि, जति प्रतिवन्ध लगाए पनि जनताले आफ्नो परिवर्तनका स्वरहरू बन्द गर्नेछैनन् । परिवर्तका लागि उठेका पाइलाहरू रोकिनेछैनन् र परिवर्तनका लागि उठेका इन्क्लाबी–हातहरू अझै माथि माथि उठिरहनेछन् । अन्तमा, सुप्रसिद्ध माक्र्सवादी कवि तथा महान् सांस्कृतिक सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को कवितांश ः
मेरो अनुभुतिमा थबाङ थात्रा : झनक श्रेष्ठ